ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: ဇက်အဘောက် မင်းသမီး Z Abauk Attress
ဇက်အဘောက် မင်းသမီး Z Abauk Attress
Z Abauk is Myanmar sexy and beautiful model girl. She isaKachin Ethnic girl. Therefore, her beauty and style is so different from other Burmese models.
Myanmar sexy model, Myanmar beautiful model, Z Abauk
Myanmar cute girl, Myanmar sexy girl, Myanmar model Z Abauk
Myanmar model girl, Kachin beautiful girl, Z Abauk
သူကတော့ မြန်မာမော်ဒယ် အဘောက် ပါ။ အဘောက် က ကချင်မလေး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်တာကြောင့် တမူထူးတဲ့ အလှ နှင့် စွဲဆောင်မှု ရှိသူလေးပါ။